Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Akụkọ Ọchịchị » Spain na Saudi Arabia na -ahụ ụzọ na -aga n'ihu maka UNWTO
Akụkọ mkpakọrịta • Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Akụkọ Ọchịchị • News • ndị mmadụ • Akụkọ na -agbasa na Saudi Arabia • Akụkọ na -agbasa na Spain • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • trending Ugbu a
Oku izizi dị n'etiti Onye isi ala Saudi Arabia na Prime Minista Spain.
Oku nke abuo ya na onye ode akwukwo UNWTO.
Ọkpụkpọ oku nke atọ dị n'etiti onye minista na -ahụ maka njem nlegharị anya nke Spain na Saudi taa mere ka MOU bịanye aka na ọnwa a na Riyadh na -emechi UNWTO ọdịnihu.
Ebumnuche gọọmentị Saudi Arabia na -akwali fombugharị nke World Tourism Organisation (UNWTO)) site na Madrid ruo Riyadh ka ejidere na mbido izu a.
Prime Minista Spain, Onye isi ala Saudi, na onye odeakwụkwọ UN sonyere igbochi ụdị arịrịọ a.
Taa HE Ahmed Al Khateeb Minista of Tourism of Saudi Arabiaa nwere mkparịta ụka ya na onye minista na -ahụ maka njem nlegharị anya na Spain, HE Reyes Maroto.
Dabere na isi mmalite eTN, nzukọ mebere n'etiti ndị ozi njem nleta abụọ si Saudi Arabia na Spain na Fraịde gara nke ọma.
Ọnọdụ Saudi Arabia bụ mgbe niile maka UNWTO ka ọ rụọ ọrụ ama ama na nke ọma iji kwado mba ndị na -emepe emepe. Saudi Arabia na -akwado nkwado ọzọ maka UNWTO site na Spen, mba ọbịa maka ụlọ ọrụ jikọtara UN.
Isi mmalite eTN gwakwara na a ga -enwe nkwupụta njikọta nwere ike ibido n'isi izu na -abịa, ebe onye ozi Spain ga -aga Riyadh ka ọ bịanye aka na MOU n'ọnwa a.
Nzọụkwụ a dị mkpa ma enwere ike ịhụ ya naanị dị ka ihe ịga nke ọma maka mbọ onye minista Saudi Arabia, onye ahụla ka ọ na -eme njem n'ụwa, na -aga mmemme UNWTO mpaghara niile gburugburu ụwa, yana atụmatụ ndị ọzọ dị mkpa.
Onye ozi ahụ jisiri ike bụrụ VIP njem nlegharị anya kacha mkpa n'ụwa, ebe obodo ya dị njikere imefu ijeri dọla iji nyere ụlọ ọrụ njem nlegharị anya ụwa aka. Saudi Arabia lepụrụ anya nke ọma maka ọtụtụ mba na mba ndị na -emepe emepe iji nyere ha aka ijikwa ụlọ ọrụ njem nlegharị anya na ụdị akụ na ụba na -agbagha ọrịa a.
N'otu oge ahụ, a hụla UNWTO ka ọ naghị arụ ọrụ nke ọma n'okpuru ndị na -adịghị ike na ụfọdụ na -ekwu na ndị ndu na -emegiderịta onwe ha. Ndị odeakwụkwọ ukwu abụọ gara aga hụrụ nhọpụta nke onye odeakwụkwọ ukwu ugbu a dị ka nke na -ezighi ezi na nke na -adịghị mma.